China spandex tafura yekuvhara yemuchato kana yemabiko shandisa Mugadziri uye Mutengesi | Jianye
Doro & pikiniki tafura
Kureba Adjustable Tafura
tafura yakasimba / Rectangle tafura
Tafura ye Square
spandex tafura yekuvhara yemuchato kana yemabiko kushandiswa
Kumba, Kunze, Hotera, Muchato, Mabiko
spandex tafura yekuvhara
chena, nhema, bhuruu uye tsvuku
mabiko & tafura yekupeta
50000 Unit / Units pamwedzi
imwe pc mune imwe pe bhegi uye makumi mashanu pcs mune rekunze katoni ye spandex tafura yekuvhara
Muenzaniso Nha HY-TC
Mashoko Hunhu spandex jira, 10% lycra + 90% polyester, jira inzira ina dzakatambanudzwa
Mucheka GSM Nezve 200g / m2
Ruvara chena, dema uye tsvuku (isu tinogona kuita chero ruvara ruripo mune chevara chati kana tsika yakadhayiwa)
Tafura saizi 183 * 76 * 74cm & 244 * 76 * 74cm, chero saizi rectangle
OEM Yakagamuchirwa Hongu
Kushandisa Mabiko, muchato, imba kana kuresitorendi
Kubatsira Nyore Isa / kudzima, Inogara, Inoda Ruvara, Yakanakisa mutengo-kugona, kuunyana pasina, ruoko nyoro kunzwa, kudzora kusagadzikana
Semuenzaniso Mutengo sampu yemahara uye sampuro yekutakura nemutengi kubhadhara
Mharidzo Yekutungamira Nguva anenge mazuva mashanu
Nguva Yekugadzira anenge mazuva gumi
Kubhadhara 30% TT mberi uye 70% TT pamberi pakukurukura nhumbi, 100% TT pa kuona
Sumo Tinogona kuita saizi chaiyo, nekuti isu tine tafura yakanyatsonaka
Kavha & Kutumira
imwe pc mune imwe pe bhegi uye makumi mashanu pcs mubhokisi rekunze
1.pa yemahara sampuro yekusimbisa
2.According kune mutengi zvinodiwa kugadzira uye kubereka
3.offer kupinza uye kutumira kunze zvinyorwa
4. Mushure mekutengesa-yekutevera sevhisi
Shaoxing Jiangye zvigadzirwa zvekunze kunze. Iyo nzvimbo inongova 50KM chete kubva kuNingbo Port, uye 200KM kubva kuShanghai Port, uko inonakidzwa nekuwana nyore kwekutaurirana. Iyo kambani yatowana zvigadzirwa zvepamusoro-soro, senge komputa flan mutungamiriri wepurasitiki yekurova muchina kubva 500g kusvika 15000g, kumonyanisa muchina uye kugadzira muchina. Zvigadzirwa zvikuru muHongye matafura, zvigaro nemabhenji emukati nekunze, ayo anogamuchirwa nevatengi vese pasirese.
Hunhu, hunyanzvi, uye mukurumbira ndiwo hwaro hwebhizinesi rakavambwa. Zvese zvigadzirwa muHongye zvinogona kutaridzika semhando yepamusoro uye yakashongedzwa dhizaini. Dhirowa kana sampuli dze co-kugadzira zvigadzirwa kubva kunyika dzepasirese zvinogamuchirwa. Ngatisanganei, kuti ramangwana rive rakanaka uye rakajeka.
1. Chii chakanakira mbishi zvinhu HDPE zvichienzaniswa nezvimwe zvinhu, senge PP, ABS?
Inoita matafura akasimba, kureruka, uye kusimba uye kurema, nyore kuchenesa, nyore kutakura, seay kumisa.
2. Chii chiri hunyanzvi hwekugadzira chigadzirwa?
Furidzira muforoma uye upfu-zvemapuranga simbi furemu
3. Inguva yakadii yechigadzirwa garandi uye sei ini faira ini chikumbiro?
gore rimwe munzira chaiyo yekushandisa
4.How nezve MOQ
1 * 40HQ mudziyo unogona kusanganisa marudzi ese ematafura nemacheya. Asi kana zviri zvishoma
5.How nezve OEM uye yekudhinda logo?
OEM izvo zvakanaka, kana isu tikatora iyo mutengi brand trademark mvumo tsamba, isu tinosunungura anodhinda logo kana odha yakawanda yakakura
6. Chii chinonzi kubhadhara uye unowana sei zvinhu kubva kuChina?
30% yekumberi kubhadhara uye unogona kuodha ngarava kana isu tinobatsira iwe kuodha chikepe.Kana zvinhu zvapera, isu tinotakudza mudziyo .Mutakura anotakura anotipa B / L isu tinokutumira iwe B / L kopi neemail kana fakisi, iwe unofanirwa tibhadharire mari yekuenzanisa uye isu tinokutumira yako yekutanga B / L CO uye kurongedza runyorwa invoice .Ungashandisa magwaro aya tora zvinhu zvako kubva kunzvimbo dzemuno
7.Iko musika wedu mukuru uripi?
Europe, maodzanyemba eAfrica zvichingodaro
Pashure: Multi-shandisa epurasitiki yekupeta bha tafura yemabiko
isu tinogadzira yakanakisa mune yakasarudzika fenicha yemukati uye midziyo yeiyo yekugamuchira vaeni, yekudyira uye yekutengesa maindasitiri pasi rese.
Isu tiri nyanzvi fenicha midziyo vanotengesa, tichipa fenicha yemhando yepamusoro yemahotera nemaresitorendi kusanganisira akasiyana siyana emahotera eimba yekurara.
Tiri nyanzvi mukugadzira mhando Custom Hotel Furniture.
Semugadziri wefenicha yehotera isu tinokwanisa kugadzirisa chero dhizaini kuti isangane nematanho emhando huru dzese dzehotera.
Isu tinopa isingagumi hotera fenicha dhizaini, kubva kuchinyakare kusvika kune yazvino, tichishandisa akanakisa zvigadzirwa uye ekuvaka matekiniki. Tinogona kugadzirisa chero hotera fenicha chidimbu pane chako chikumbiro.
Isu tinogadzira fenicha yemahotera akajairwa uye fanicha yemahotera kusanganisira emahotera emahotera, emahotera ehotera, maCredenzas, hotera Micro Fridge Vapfeki, Magirazi ehotera, Madhesiki ehotera, Chairs ehotera uye Mahotera Ekuita mahotera.
Kukura kunogona kugadzirwa.
Ruvara runogona kuvezwa (Rakajeka, chena, dema, pink, kofi, goridhe, nezvimwewo)
Rakaumbwa zvinogona customized.
Dhinda dhizaini & Yakavezwa pateni inogona kuve yakagadzirirwa.
Dhirowa huwandu hunogona kugadzirwa.
Maawa makumi maviri nemana pasevhisi sevhisi
Kurumidza kupindura mukati memaawa gumi nemaviri
Zvigadzirwa zvine chitupa chepasi rose
Zvigadzirwa 100% QC kutarisa usati waendesa
Makore mashanu garandi
OEM, ODM sevhisi inogamuchirwa
Isu tinotarisira nemoyo wese kuti titange hukama hwakareba neyako, gamuchira chero kubvunza uye fekitori inoshanya.ndatenda iwe!
Kuvhara uye kutumira:
Gogodza pasi kurongedza, chikamu chega chega chakazara neFO Foam, mukati chekudzivirira, kunze neakaviri akasimba mashanu akaturikidzana mabhokisi emabhokisi, Carton mabhokisi anodhinda nevatengi Rondedzero uye tsananguro, mukati mekuraira bhuku riri nyore kuungana; With Glass zvikamu zvakazara nehuni furemu kudzivirira kusasimba.
Isu tinogadzira uye tinogadzira kukosha kwezvigadzirwa zvemari tiine garandi yegore rimwe pazvikamu zvese zvakasarudzika zvinoratidzwa mubhurocha rino.
Isu tinopa yakazara sevhisi pasuru inovhara saiti ongororo, CAD yehunyanzvi dhizaini, uye chitauro mharidzo. Kusimbiswa kunoiswa pane yehutano vimbiso inotsigirwa neiyo yakazara mushure mekutengesa sevhisi.
Yakazara nyanzvi dhizaini dhizaini.
Ongororo uye yekumisikidza gwaro.
Uchishandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye zvinhu.
Chikwata chakazara chebasa.
Zvibvumirano zvekuchengetedza kuti uve nechokwadi chekuti yako yakakosha pfuma inoramba iri mune yakazara basa kurongeka.
Seunyanzvi hwekugadzira, isu hatisi kungogadzira chete, isu zvakare tinogadzira, tinunure uye tine mushure-kutengesa sevhisi yevatengi. Kana mutengi achida basa rekumisikidza, isu zvakare tinokwanisa kutumira matekinoroji edu kutarisa iko kuiswa. Uye zvakare, isu zvakare tinogona kupa Mahara dhizaini kune wese mutengi uye isu tinopindura mumaawa gumi nemaviri kana vatengi vacho vaine chero mibvunzo.
zvakachipa wedzera cheya chivharo
Yakakwira mhando spandex tafura yekuvhara cheya cheya
2018 folding tafura yekuvhara yemabiko emuchato
Hot Kutengesa Tafura uye Sachigaro Inodzivirira Seat Cover
Hot Sale zvakachipa inotakurika cheya pabutiro kwakavharwa nenyama cha ...
inopisa kutengesa inflatable yemuchato spandex macheya uye ...
YEMAHARA KUSANGANA 0086-18042502196
Kero Qingfeng Village, Yonghe Maindasitiri Zone, Shangyu Guta, Zhejiang Provice, China